Semalt: Isikhokelo Esinqununu sokukhusela i-Spam Referrer Kwi-Google Analytics yakho
uNik Chaykovskiy, ingcali evela kwi-8 (Semalt , iqinisekisa ukuba ukuhanjiswa kogaxekile ngenye yeengxaki ezithatha i-webmasters njengamanje. Le meko iye yaqhubeka ingaphezu kweminyaka, nto leyo ithetha ukuba umntu kwindawo ethile wenza imali eninzi ekudaleni ugaxekile logaxekile.
Umoya woMoya kunye noKhenketho
Ugaxekile ngoku wenze indlela eya kwiingxelo zeGoogle Analytics. Abakwa-Spammers bajonga ukukhuseleka kwenkqubo ukwenzela ukuba bavele kwiingxelo zeedatha zewebhu. Bakwenza oku nethemba lokuba bafuna ukufuna ukwazi ukuba i-webmaster ivakatye kwiwebhusayithi yabo ukuba ibone ukuba kutheni ingxelo. Ingxaki kukuba ayinyuli kwimizila. Abayifumananga nangoko kuba i-bots - buy vps cheap. Basebenzisa ikhowudi yokulandelela i-JavaScrip esebenzisa i-Google Analytics ukudala isaziso sokuba kukho ukutyelela. Baye baqukumbela iifomati ezibalulekileyo ezifana nezindleko zokuhlawula kunye nezinye izinto ezisetyenziselwa ukuhlalutya inxaxheba. Kubalulekile ukukhusela ugaxekile logalelo xa umntu efuna iinkcukacha ezichanekileyo ngokukodwa xa athembela kuyo ukwenza izigqibo zokuthengisa.
Kuya kuba nzima ukuvimba ugalelo logalelo ngokukodwa kuba abagaxekile basebenza ngokukhawuleza, banyusa izinga leentshukumo zogaxekile kunye nemithombo. Kuthetha ukuba i-webmasters kufuneka iphucule kwimzamo abayifakeyo ekupheliseni kunye nokuluhlu lwabantu abamnyama. Kubaluleke kakhulu kubantu abanesayithi elitsha abangenayo imoto efanelekileyo. Ukwenyuka kwamazinga okugaxeka kwiindawo ezinjalo kuza kubonisa ukugqithisa okungaphezulu kwimihla ngemihla ehlabayo.
Kulula kangakanani na?
Elinye iphepha lilayisha iirekhodi njengetyelelo olulodwa. Abagxeki be-spammers basebenzise ikhowudi yokulandelela ye-Google Analytics baze bathumele idatha ye-traffic ngqo kwiingxelo, ngaloo ndlela baqulunqe ukutyelela. Ingathatha i-0.001 imizuzwana ukulayisha iphepha elilodwa kwiseva kwindawo ethile..Nangona kunjalo, banokunyanzelisa i-100 yezi zihlandlo ezibukhali kwii-akhawunti zeGoogle zezinye iindawo ezininzi. Kulula kakhulu ukuthenga omnye umphathi. Ngethuba nje ukuba abagaxekile baqinisekile nge-ROI, kukho umonakalo omkhulu abanokuwenza nabo.
Iisombululo eziza Kufutshane
Amanye amacebo ngamanye amaxesha aphakame kakhulu ukuba izisombululo eziqeshwe ukuvimba ukuthunyelwa kogaxekile akusebenzi. Enye yazo yinkonzo engummangaliso ebizwa ngeDarodar. Ezi ndlela zilandelayo azizange zicacise kwi-GA.
Iifayile .htaccess. Akusebenzi kuba i-spam spam ayithinti indawo
Uludwe lokungabandakanywa kokudluliselwa. Ayinakho ukuhlaziywa.
Iifayile zokungabikho. Yindlela yokudlulileyo kuba ijolise kuphela kwixesha elizayo logaxekile kwaye aliyi kuphinda lisebenzise kwakhona ulwazi oludlulileyo lwe-spam yolwazi.
Isihlunu sokungabikho ngokufutshane sifikile ekugqibeleni ukususa i-spam yokudlulisa i-Darodar. Umlinganiselo wodwa wokuba wawungenaso uluhlu oluthathwe ngokutsha oluthatywayo lwe-spammer.
Umdlalo wePuzzles Missing
Isisombululo esisebenzayo sokuchonga kunye nokuvimba ukuthunyelwa kunye nedatha yefowuni kufuneka ihlaziywe ngokutsha, livela kwi-database ebanzi, kwaye ibuye ibuyele kwiinkcukacha ezidlulileyo. Ngokusekelwe kwimiba emithathu kwisisombululo esipheleleyo, nantsi enye esebenzayo.
Inyathelo 1: Ukusebenzisa Amacandelo ukuba Ungabandakanyi ugaxekile
Kungcono ukusebenzisa amacandelo kuba bengatshintshi idatha ngokusisigxina. Ukuba umntu uphawula ngokungcolileyo abathungi boqobo xa besebenzisa izihlungi, akukho ndlela yokuzibuyisela. Kungenzeka ukwakhiwa kwedatha endala usebenzisa amacandelo, nangona kwenzeka ixesha elingakanani. Omnye unokuwasebenzisa ngokuphindaphindiweyo.
Isinyathelo 2: Ukugcina uLuhlu lokuCima
I-Slack iyisistim e-webmasters esinokuyisebenzisa ekujongeni imithombo yokuthumela..Ikwazisa umsebenzisi malunga naluphi na ukuthunyelwa okutsha kwaye ubanika i-prompt: ingaba umhlophe okanye uluhlu olumnyama luvela kumthombo wokubhenela.
1. I-Slack ifumana bonke abathunyelwayo, kunye
2. Isebenzisa i-PHP ukuhlenga zonke iziphumo ngomyalelo wokubala, uze udibanise uluhlu lokugqibela kwi-webmaster ukuze ubone ukuba kukho na into ebonakalayo eyaziwayo. Ukuba akunjalo,
3. Ihambela yonke into ekhunjelwayo yogaxekile kumzila wesondlo onika umsebenzisi ukhetho phakathi komhlophe okanye uluhlu lwabantu abamnyama. Naluphi na ukhetho olukhethayo, lukhokelela kwisinyathelo 4,
4. Iphinda ibuyele kwiphepha eliqinisekisa isigqibo njengesiqinisekiso sokhetho.
5. Slack ke ugcina kwaye uvale bonke abagaxekile abachongiweyo kwiziko leenkcukacha
6. Idatha yokugqibela yedatha ecocekileyo iya kuba kwifom ye-regex. Kopisha kwaye unamathisele kwi-Google Analytics.
I-Slack ivumela abaphathi bewebhu ukuba bahlaziye uluhlu lokunciphisa ubuncinane ubuncinane amahlanu ngosuku.
Ngokwenene, iziSombululo ezininzi ziSebenza:
Nangona le ndlela ibonakalisiwe, iya kusebenza ngakumbi ukuba i-webmaster iyenze ngezinye iindlela, ukuqinisekisa ukuba zihlanganisa zonke iziseko. Ukongeza kwisisombululo esisisisombululo:
Cofa kwibhokisi yokukhangela eyenza iGoogle Analytics ukuba ingabandakanyi i-bots nee-spider ziwayo,
Faka isicelo "faka isihlomelo segama lomncedisi,"
Isihlunu esicacisiwe esichazwe apha ngentla siphumelele ngezinye ixesha, kodwa asiyiyo isisombululo esiphezulu ngenxa yokuba:
Umncedisi wegama lokusasaza akunzima ukwenza, kwaye abahlaziyi-spammers bahlalutya ngokuyisebenzisa njengabantu abasengozini.
Ukuba ukusetha kungalunganga, kunokuphela kokucoca ababenokubhenela.